5ta Cayaaryahan Ee Ugu Cadcad Abaalmarinta Kabta Dahabka Qaaradda Yurub – Garsoore Sports
5ta Cayaaryahan Ee…
5ta Cayaaryahan Ee Ugu Cadcad Abaalmarinta Kabta Dahabka Qaaradda Yurub
Kabta dahabka ah qaaradda Yurub xilli-cayaareed kasta waxaa la siiyaa cayaaryahanka ugu dhibcaha badan. Dhibcaha waxaa la xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada goolasha ay cayaartoodaas ka dhaliyeen horyaaladooda. Isku-dheellitir la sameeynayo ayaa waxaa lagu saleynayaa sida uu u adkaa horyaal gaar ah iyo bandhigyadii uu sameeyay cayaartooyga.
Haddaba 5-taan xiddig ayaa loo magacaabay kuwa ugu sarreeysa ee liiska kabta dahabka Yurub ku tartamaya sannadkan.
#5 Kylian Mbappe – 26 gool – Paris Saint Germain
Kylian Mbappe ayaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay dhaxalka xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. Weeraryahanka PSG ayaa sii wada inuu ku fiicnaado goolka hortiisa waana gooldhaliyaha ugu sareeya Ligue 1. Mbappe ayaa u dhaliyay Paris Saint-Germain 26 gool 30 kulan oo uu saftay Ligue 1 xilli ciyaareedkii dhammaday.
#4 Andre Silva – 27 goals – Eintracht Frankfurt
Andre Silva ayaa noqday cayaaryahan layaab leh xilli ciyaareedkii 20/21 ee Bundesliga kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu wacdaro ka dhigo Sevilla iyo AC Milan, Silva wuxuu muujiyay balanqaad badan intii lagu guda jiray amaahdiisii ugu horreysay ee uu ku qaatay Frankfurt xilli ciyaareedkii 19/20, isagoo dhaliyay 12 gool isla markaana caawiye ka ahaa seddex kale 25 kulan oo uu ka soo muuqday Bundesliga. Wuxuu Frankfurt u saxeexay heshiis joogto ah billowgii xilli ciyaareedkii 2020-21, Andre Silva ayaana goolal u dhaliyay iyaga.
Weeraryahanka reer Portugal, oo ay haatan isha ku hayaan kooxo waa weyn oo Yurub ah, oo ay ku jirto Manchester City, ayaa dhaliyay 27 gool 31 kulan oo uu saftay Bundesliga xilli ciyaareedkan. 25 jirkaan ayaa celcelis ahaan gool dhaliya 99kii daqiiqo ee kasta wuxuuna ku jiraa qaab ciyaareed heer sare ah.
#3 Cristiano Ronaldo – 29 gool – Juventus
Juventus ayaa wajahday xilli-cayaareed liita marka loo eego heerarkooda laakiin haddii aysan haysan lahayn Cristiano Ronaldo, way ka sii xumaan lahayd siddan.
Ronaldo ayaa dhaliyay 29 gool 33 kulan oo uu saftay Serie A xilli ciyaareedkii dhowaan idlaaday.
#2 Lionel Messi – 30 gool – FC Barcelona
Lionel Messi ayaa tirinayay nambarro aan caadi aheyn kaddib isku-deygiisii laga horjoogsaday ee uu ku doonayay ka tegitaank Barcelona xagaagii hore, oo ay ku xigtay in madaxweynihii waqtigaas oo ay is qabsadeen ee Josep Maria Bartomeu iyo guddiga agaasimayaasha ah ay iscasilaan.
Lionel Messi ayaa dhaliyay 30 gool oo horyaalka La Liga ah 35 kulan oo uu saftay xilli-cayaareedkii dhowaan idlaaday ee 2020-21.
#1 Robert Lewandowski – 40 gool – Bayern Munich
Shaki la’aan waa weeraryahanka ugu fiican adduunka haatan.
Xiddiga reer Poland ayaa olole fiican qeyb ka ahaa xilli-cayaareedkii 2019/20 isaga oo dhaliyay 34 gool oo horyaalka ah, balse waxa uu kabaha dahabka qaaradda Yurub u seegay Ciro Immobile. Markan si kastaba ha ahaatee, wuxuu si buuxda u hubiyay inuusan lumin doonin billadan. Lewandowski ayaa 10 gool ka horreeya Messi oo 2aad ku jira. Waxaana uu dhaliyay 40 gool kaliya 28 kulan oo uu saftay horyaalka Bundesliga xilli-cayaareedkii dhowaan dhammaaday ee 2020-21.
Liiska Cayaartooyda Xulka Ingiriiska Ee Tartanka Qaramada Yurub Oo La Shaaciyay